Chọọ onye na Gmail
Nsogbu nsogbu na-arụ ọrụ Rambler Mail
Ozi Rambler - ọ bụ ezie na ọ bụghị ozi a kacha mara amara ma bụrụ nke a pụrụ ịdabere na ya. Ọtụtụ ndị ọrụ na-ahọrọ ịnwe igbe igbe ebe a. Ma mgbe ụfọdụ, na-agbalị ọzọ ịmepe ozi ha, ha nwere ike izute ụfọdụ nsogbu. Ozi Rambler anaghị emeghe: nsogbu na ngwọta ha Ọ dabara nke ọma, nsogbu ndị a na-adịghị edozi.
Ozi Rambler - otu n'ime ọrụ maka mgbanwe nke ozi kọmputa (leta). Ọ bụ ezie na ọ bụghị dịka ewu ewu dị ka Mail.ru, Gmail ma ọ bụ Yandex. Ma ọ bụ ozi, ma, ọ bụ ihe dị mfe iji mee ihe ma kwesiri nlebara anya. Otu esi emepụta igbe ozi Rambler / mail Ịmepụta igbe igbe - usoro dị mfe ma anaghị ewe oge.